Thailand ayaa dib u furtay Phuket si loogu talaalay dalxiisayaasha ajnebiga ah 1-dii Luulyo
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Thailand » Thailand ayaa dib u furtay Phuket si loogu talaalay dalxiisayaasha ajnebiga ah 1-dii Luulyo
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Thailand • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Gudoomiyaha TAT Yuthasak Supasorn
Hoteellada iyo goobaha kale ee dalxiiska ee gobolka jasiiradda ayaa loo diyaariyay ololaha dib u furista illaa iyo 80 boqolkiiba dadka deggan Phuket ayaa laga tallaali doonaa COVID-19 illaa Arbacada.
Marka loo eego barnaamijka 'Phuket Sandbox', dalxiisayaasha ajnebiga ah ee la tallaalay ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan oo ay si xor ah ugu dhaqaaqaan jasiiradda.
Qiyaastii 400 ilaa 500 oo dalxiisayaal ajnabi ah ayaa loo qorsheeyay inay yimaadaan Phuket maalinta Khamiista.
Tallaabadan ayaa timid iyadoo Thailand ay la daalaa dhacayso xakameynta infekshannada bilihii la soo dhaafay ku batay.
Gudoomiyaha Gobolka Hay'adda Dalxiiska ee Thailand (TAT) ayaa maanta ku dhawaaqay in boqortooyadu ay diyaar u tahay inay bilawdo ololaha 'Phuket Sandbox' bisha Luulyo 1 iyo inay dib u furto jasiiradda loo dalxiis tago si loo tallaalo dalxiisayaasha shisheeye.
Hoteellada iyo goobaha kale ee dalxiiska la xiriira ee ku yaal dhammaan jasiiradda ayaa loo diyaariyey ololaha dib u furista halka boqolkiiba 80 dadka deggan Phuket, oo ay ku jiraan kuwa loo kireysto hoteel iyo warshadaha dalxiiska, laga tallaali doono COVID-19 illaa Arbacada, Guddoomiyaha TAT Yuthasak Supasorn ayaa yiri.
Qiyaastii 400 ilaa 500 oo dalxiisayaal ajnabi ah ayaa loo qorsheeyay inay yimaadaan Phuket Khamiista qaar badan oo kalena la filayo inay raacaan taariikhaha dambe, ayuu yidhi.
Marka la eego barnaamijka 'Phuket Sandbox', dalxiisayaasha ajnebiga ah ayaa loo oggolaan doonaa inay galaan oo ay si xor ah ugu dhaqaaqaan jasiiradda, haddii ay si buuxda uga tallaalan yihiin fayraska oo ay iska baareen. Waxay u safri karaan qaybaha kale ee Thailand ka dib markay jasiiradda joogaan 14 habeen.
Tallaabadan ayaa timid iyadoo Thailand ay la daalaa dhacayso xakameynta infekshannada bilihii la soo dhaafay ku batay. Isniintii, waddanku wuxuu soo wariyay 5,406 kiis oo ah COVID-19, oo ah kan saddexaad ee ugu sarreeya maalin kasta tan iyo markii uu cudurku bilaabmay, taasoo wadarta guud ee kiisaska ka dhigaysa ku dhowaad 250,000.